Xiriirka kubadda Kolayga qada sharaf soo Dhawayn ah u sameeyay Halyeey Qaran Macallin Tuke+Sawirro
Monday, May 20th, 2019 - 14:23:16
Thursday November 08, 2018 - 11:33:37 in Wararka by Hussein Hadafow
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Kolayga ayaa xaflad qado sharaf ah u sameeyay Macallin Cabdullaahi Xasan Saalax (Tuke) oo kamid ah halyeeyada Isboortiga Soomaaliyeed taariikhda wayn ku leh.
Xafladda qado sharafta oo ka dhacday magaalada muqdisho waxaa kasoo qayb galay, Guddoonka iyo guddiga Fulinta Xiriirka kubadda Kolayga, Rugcadaayaal Isboorti oo ay kamid ahaayeen, Cabdulqadir Ibraahin Gacal Abkow, Xaaji Maxamed Axmed Colow, Maxamed faarax Damdamis,Ibraahin Xuseen Cali Roombo, Maaxi Bilaal Maye, Macallin Maxamed Shiikh, Ciyaartoy , Macallimiin iyo Taagerayaashi hore ee isboorti.
Kulanka oo ay masuuliyiintii ka hadashay aad ugu dheeraadeen taariikhdii lama iloobaanka ah ee uu macallin Tuke ku leeyahay Isboortiga Soomaaliyeed oo kasoo bilaabanaysay 1950-aadki, waxaana mahad celin ballaaran u jeediyay dhamaan bahdii kulanka kasoo qayb galay.
Sidoo kale waxaa goobta aad loogu fallanqeeyay heerka uu soo maray isboortiga Soomaaliyeed muhiimada ay leedahay qiimaynta Halyeeyada Isboortiga uu dalka Leeyahay uu Macallin Tuke kamid yahay iyo sidii sare loogu qaadir lahaa.
Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Kolayga Mudane Cabdullaahi Nuur Maxamed Cadaani oo Xiriirkuusu qada sharafta sameeyay ayaa sheegay in Xiriirka ay aad muhiim ugu tahay inuu xafladadan soo dhawaynta ah u sameeyoMacallin Tuke, maadaama uu ka mid yahay dadka in kabadan Nus qarni u taagnaa horumarinta Isboortiga Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha ayaa dhanka kale Xusay in Xiriirka kubadda Kolayga uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato Ciyaaraha dalka Canada ka dhici doona ee lagu maamuusayo 60 sano ee uu Macallin Tuke Isboortiga Soomaaliyeed qaybo kala duwan kasoo shaqeeeyay iyo horumaradii uu Isboortiga gaasiiya.
Macallin Cabdullaahi Xasan Saalax ( Tuke) oo xaflladda ka hadlay ayaa isagoo qiiraysan aad uga mahad celiyay Soo dhawaynta loo sameeyay ayna tahay arrin uu ka filayay bahda Isboortiga ay u istaagto soo dhawayntiisa, waxuuna xusay in ay jiraan dad badan oo qaarna dhinteen qaarna nool yihiin oo dalkaan Isboortigiisa wax badan usoo qabtay, waxuuna goobta ka sheegay dhacdooyin taariikhi ah mudadii uu Isboortiga ku dhex jiray ka dhacaydalka gudahiisa iyo dibadiisa.
Macallin Cabdullaahi Xasan Saalax ayaa ciyaaraha soo bilaabay 1950-aadki kahor intii uusan dalka Xornimada qaadan, waxuuna usoo ciyaaraha kooxaha Autobaarka( Gaadiika) iyo Jeenyo, sidoo kalewaxuu macallin usoo noqday Naadiyada , Jeenyo , Gaadiika, Waxool, Gobolka Banaadir , Marka iyo Burco oo uu ciyaaraha Gobolada Hogaamiyay, xilligan la la joogo waa wakiilka Guddiga olombikada Soomaliyeed ( GOS) ee dalka Canada.